Bee Imikhiqizo: wangempela Superfoods - J & S Botanics
Bee Imikhiqizo: wangempela Superfoods
Abathobekile honey bee ingenye eziphilayo ezibaluleke kakhulu bemvelo. Izinyosi zibaluleke ukwenziwa ukudla ukuthi thina bantu ukudla ngoba ungcolise izitshalo kwalokhu abakubutha imihla umpe kusuka izimbali. Ngaphandle izinyosi singathanda ukuba nesikhathi esinzima ezikhulayo okuningi kokudla kwethu.
Ngaphezu kokukusiza izidingo zethu yezolimo, izinyosi ukwenza imikhiqizo eziningana sikwazi ukuvuna bese usebenzisa. Abantu bebelokhu ukuqoqa nokusebenzisa kwabo zeminyaka futhi ukuzisebenzisa sokudla, isithokela, nemithi. Namuhla, isayensi yesimanje baxoxelane lokho Thina siyalwazi njalo: imikhiqizo bee kunenani elikhulu kwezokwelapha nasekondleni.
Uju umkhiqizo wokuqala futhi kusobala kakhulu ukuthi efika engqondweni yakho uma ucabanga mayelana nemikhiqizo bee. Itholakala kalula izitolo zokuthenga kanye abantu abaningi esisebenzisa njengophawu Sweetener esikhundleni ushukela elicwengisiswe. Uju ukudla izinyosi zithathe by lokuqoqa umpe kusuka izimbali. Baguculela umpe ku uju ngu regurgitating futhi uzivumele shabalala ukuba agxilise Ngokudla ushukela ezakha izithako zako esiyinhloko. Ngaphezu ushukela, uju iqukethe trace amanani amavithamini, amaminerali, fiber, amaprotheni nezinye izinto.
Ukunambitheka uju kuyinto ehlukile futhi ehlukile nice ezinye ushukela. Kodwa izinzuzo uju sihambe ngalé ukunambitheka kanye ubumnandi. Uju kunezinzuzo eziningi zempilo, kokubili njengoba okuthile nawe ungadla njengoba imithi nezokusigcoba. , Qaphela, Nokho ukuthi uju owasebenzisayo kumele idliwe iluhlaza njenge-ezingacubunguliwe.
Antioxidants . Uju ecebile Antioxidants, ezisiza ukulungisa umonakalo owenziwe emizimbeni yethu ubuthi kwemvelo. I mnyama uju, Antioxidants ngaphezulu abanazo.
Impumuzo yokungezwani komzimba . Uju Raw futhi ezingacubunguliwe iqukethe izinto ezixabana nomzimba kusukela imvelo, kuhlanganise pollens, isikhunta, nothuli. Uma udle kancane uju unfiltered ukuthi yadalwa endaweni yangakini nsuku zonke, uzothola ukuthi uthola impumuzo kuleyo izimpawu zakho yokungezwani komzimba. Ngu sokuphuzisa nge nomzimba wakha i ukungatheleleki zemvelo kubo.
Impilo wokugaya ukudla . Uju esiye kugayeke ngezindlela ezimbili. Ngo elingenhla pheshana emathunjini izakhiwo elwa namagciwane uju kunganciphisa amazinga amagciwane abangela izilonda. Esikhathini uju ikholoni inikeza probiotics ziyolekelela ukugaya.
Ukwelapha amanxeba . Njengoba amafutha ngokwezihloko, uju ingasetshenziswa aphathe amanxeba. It has nemiphumela-antibiotic futhi igcina amanxeba ahlanzekile ukuze bakwazi ukuphulukisa ngokushesha.
Imiphumela anti-inflammatory. Ukuvuvukala olunamandla iyingxenye ezingokwemvelo zokwelapha, kodwa ongaphakeme-ebangeni, ukuvuvukala ezingamahlalakhona oluhlupha eziningi kangaka baseMelika ngenxa yokudla okungenamsoco ziyalimaza. Uju waziwa ukunciphisa ukuvuvukala okungalapheki imithambo eletha isifo senhliziyo. Iphinde kuzole lihlela isilinganiso phakathi kwama-cholesterol okuhle nokubi.
Ukukhwehlela ukucindezelwa. Ngesikhathi esilandelayo lapho unomkhuhlane ukunezela isipuni uju inkomishi yetiye elishisayo. Uju suppresses ukukhwehlela futhi kukhona amanye ubufakazi ukuthi kungasiza ekupholiseni umkhuhlane futhi ukunciphisa ubude bayo.
Thayipha-2 sikashukela. Kubantu abanalesi uhlobo-2 sikashukela, kubalulekile ukugcwalisa egazini ushukela. Uju ikhishwe kancane ingene egazini kuka ushukela elicwengisiswe, okwenza kube isinqumo esihle abanesifo sikashukela.
Bee impova kuhlukile uju. Kuyinto impova ukuthi izinyosi aqoqene kusuka izimbali futhi awafaka elimbudumbudu encane. Izinyosi, impova amabhola zigcinwa esidlekeni futhi wabasebenzisa njengezinceku kuwumthombo wamaprotheni. Njengoba Paka impova kwezinye izingxenye isidleke kunezelwa ke kuhlanganise enzyme kusukela ngamathe inyosi sika, ama-bacterium, nompe.
Maqondana nesintu, bee impova iyindawo enamandla yokwenza yokudla okunempilo kanye kunezizathu eziningi ukuyisebenzisa njengengxenye yokudla yakho ejwayelekile. Kubalulekile ukwazi ukuthi bee impova ayitholakali kweminye imikhiqizo bee njengoju lwezinyosi kanye jelly royal. Futhi qaphela bee imikhiqizo impova nge izithasiselo. Lezi akuzona imikhiqizo yemvelo futhi kungase kube ngisho nelimazayo.
Qedela umsoco. Bee impova iqukethe wonke izakhi thina bantu kudingeka kuwo elimbudumbudu encane. It has amaprotheni, ama-carbohydrate, amafutha, Antioxidants, amavithamini namaminerali anele. Kuyinto ukudla okuphelele.
Isilawuli isisindo. Bee impova Kuye kwatholakala ukuthi ukusiza abantu balahlekelwe futhi uphathe isisindo uma kusetshenziselwa ibhekwa ukudla okunempilo nokuvivinya umzimba njalo. Kungase kusize by inkanuko lokugayeka kokudla emzimbeni.
Impilo wokugaya ukudla. Ucwaningo luveza ukuthi ukudla bee impova kungayithuthukisa impilo yakho wokugaya ukudla. Lokhu kungase zingachazwa ngezinqubo yokuthi iqukethe fibre kanye probiotics.
Isifo sokulahlekelwa yigazi. Iziguli anemiya unikezwa bee impova banda egazi abomvu egazini. Kungani lokhu kwenzeka bengayiqondi, kodwa bee impova zinsiza kubonakala ukusiza abantu igazi.
Amazinga egazi cholesterol. Bee impova ibhekwa njengoba baye ekulawuleni izinga le-cholesterol egazini. Kubangela amazinga cholesterol enhle (HDL) ukuba bakhuphuke, ngenkathi amazinga cholesterol embi (LDL) ukwehla.
Umdlavuza zokuvimbela. Ngo izifundo nge amagundane, bee impova ekudleni uvinjelwe kumiswa izimila.
Yokuphila Isikhathi Eside Ise. Ucwaningo oluningana luye lwabonisa ukuthi bee impova kunomthelela okwehlisa yokuguga izinqubo ezithile. Kubonakala zokuthuthukisa inkumbulo, zishukumisa umzimba, uqinise inhliziyo nokuvaleka kwemithambo, futhi inikeza izakhi ukuthi abantu abaningi bantula njengoba bekhula.
Akumelwe ididaniswe uju, okuyinto feeds izinyosi eziyizisebenzi, jelly royal iyona ukudla bee indlovukazi, kanye izibungu ekoloni. jelly royal ingenye izici obhekene ekuguquleni, kuphuma iqhimiza elinemilenze ibe indlovukazi kunokuba bee isisebenzi. Ukwakheka jelly royal kuhlanganisa amanzi, amaprotheni, ushukela, kancane fat, amavithamini, Antioxidants, izici ngemithi elwa namagciwane, trace amaminerali kanye enzyme. Lihlanganisa ekhuthaza ngokuthi indlovukazi bee acid, abacwaningi aphenya, futhi lapho kucatshangwa ukuthi isihluthulelo aguqulayo ezejwayelekile honey bee ku indlovukazi.
Ukunakekelwa kwesikhumba. Jelly royal zingatholakala kweminye imikhiqizo nezokusigcoba ubuhle ngoba kungenzeka Ukusiza ukuvikela isikhumba elangeni. Kungase alungise ngisho ezinye umonakalo kakade kubangelwa ilanga, kuhlanganise ekubuyiseleni collagen nokunciphisa ukubonakala izindawo ensundu.
Cholesterol. Njengoba kokubili uju kanye bee impova, usithathela jelly royal esiye silinganise out cholesterol okuhle nokubi egazini.
Anti-isimila izakhiwo. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi jelly royal, lapho injected amangqamuzana omdlavuza, engabambezela ukukhula izimila.
Nempilo yokuzalana. Ezinye abasekela jelly royal uthi kungaba ngcono wenzalo yowesifazane ngisho lokukhumbula izimpawu of PMS.
Impilo wokugaya ukudla. Jelly royal yaziwa bakwazi ukududuza lezimo eziningana isisu kusukela izilonda ukuba ukuqunjelwa ukuze ukuqunjelwa.
Okunye Bee Imikhiqizo
Raw, organic, futhi ezingacubunguliwe uju, bee impova, futhi jelly royal konke lula ukuthola at impilo yakho esitolo ozithandayo, noma kangcono nokho, a beekeeper wendawo. Kunezindlela neminye imikhiqizo ezimbalwa ezenziwe izinyosi ezisesidlekeni ezingenziwanga wafunda kanye kanye ezingavikelekile njengoba kulula uthole izandla zakho phezu. Propolis Ngokwesibonelo, indaba anenhlaka izinyosi zithathe kusukela ubisi kanye abawasebenzisela seal ukuqhekeka okuncane futhi izimbobo esidlekeni.
Maqondana nesintu, propolis ingasetshenziswa izicelo ngezihloko ezihlukene. Akukhona umkhiqizo ukudla okunempilo, nakuba ingasetshenziswa ukwenza ushingamu. Propolis has impahla elwa namagciwane futhi iye yasetshenziswa nje ikhambi nezokusigcoba amanxeba, induna, kanye ukuqubuka. ubufakazi Limited ebonisa ukuthi futhi kungase kube usizo ukuhlela aphathe i-herpes, izinyo izifo, futhi izifo ukuvuvukala. Ubufakazi alikapheleli, kodwa propolis iphephile ukuyisebenzisa.
Ngengcina yezinyosi kungukuqiniseka okunamafutha ukuthi izinyosi zisebenzisa akha ingxenye enkulu yomsebenzi uju yabo Combs. Akukhona ezidliwayo ngomqondo wokuthi kunzima ukugaya. Akukhona ezinesihlungu, kodwa ngeke uwathole lokudla okuningi kuyo uma uzama ukuba ulidle. Yini kuhle enza zemvelo izimonyo, insipho, okhilimu, namakhandlela.
Ukusebenzisa Bee imikhiqizo Smoothies
Uju, bee impova, futhi jelly royal ningakwazi nonke ukungezwa Smoothies yakho. Into enkulu mayelana bee impova noju wukuthi ayabudla omkhulu kanye akunika izinzuzo ezinhle empilweni. Bee impova singekho mnandi njengoju lwezinyosi, kodwa inawo flavour nice. Kuyinto ukudla ocebile, ngakho ukwethula kancane. Qala nge okusanhlamvu ezimbalwa ngesikhathi futhi kancane kancane ukwandisa inani olisebenzisa ukungena phakathi ithisipuni elilodwa futhi omunye isipuni smoothie ngayinye. Zama ukukhanya bee impova ku Smoothies yakho futhi ukufafaza phezulu efana sprinkles ku ice cream. Ngenxa yakho konke smoothie yami zokupheka obonisa bee impova, chofoza isixhumanisi ngezansi.
Bee Impova Smoothies
Ungakwazi ukwengeza uju esivulekile Smoothies yakho endaweni yanoma yiziphi ezinye Sweetener ongase uzisebenzise. It ashade kahle zonke ezinye flavour, kodwa kungase futhi kukhanye kwayona. Njalo ufune uju organic kanye eluhlaza futhi uma ungakwazi ukuthola umkhiqizo owenziwe endaweni, ukuthi kungcono ngisho. Hlola emakethe umlimi eseduze nawe ukuze uthole uju wendawo.
Ukunambitheka jelly wasebukhosini Awuzizwa wonke umuntu. Kungaba Ukuthoma, futhi njengoba abanye abakuchaza ke, kancane okusolisayo. Izindaba ezinhle ukuthi udinga kuphela kancane ke (mayelana isipuni smoothie ngayinye) ukuze uthole izinzuzo zezempilo futhi ungakwazi imaski kuyo smoothie yakho nge flavour namandla. Empeleni nje, zama yokuhlanganisa ke uju ukufihla ukunambitheka.
imikhiqizo Bee iyamangalisa ngoba okuqukethwe umsoco yabo futhi amandla okuphulukisa emzimbeni womuntu ngezindlela eziningi. Njalo uqaphe lapho usebenzisa le mikhiqizo uma izinyosi iguliswa noma ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi. Nakuba ezingavamile, uma iguliswa bee inezindosi, yimuphi omunye imikhiqizo bee kungadala ukuthi ube ukuphendula kanye.
Kuyini isipiliyoni sakho nge imikhiqizo bee? Ingabe unayo ozithandayo? Sicela musa ukutshela ngokuyeka amazwana ngezansi.